192.168.8.1 -Yintoni i-WiFi hotspot?
WiFi hotspot ziindawo zokufikelela ekuvumela ukuba uqhagamshele kwinethiwekhi ye-WiFi kunye nePC yakho, i-smartphone okanye nasiphi na isixhobo xa ungekho kwiofisi yakho okanye kwinethiwekhi yasekhaya.
Amashishini amaninzi, iidolophu, kunye namanye amaziko aqalisile ukubonisa i-WiFi hotspot oko kunceda abantu ukuba banxibelelane nonxibelelwano olukhawulezayo, olukhawulezayo lwe-intanethi olukhawulezileyo kuneenethiwekhi ezingasebenzisi zintambo.
Okwangoku yintoni indawo yeWiFi kwaye isebenza njani? Ngaba iindawo ekuhlalwa kuzo zikhuselekile? Funda lonke ulwazi olifunayo ngezantsi.
Isebenza njani i-WiFi hotspot?
Indawo ekuhlala kuyo iWiFi isebenza ngokufanayo nonxibelelwano lweWi-Fi onokulufumana eofisini yakho okanye ekhaya. Iindawo zokuhlala zeWiFi zisebenza ngokuba nonxibelelwano lwe-intanethi kwaye zisebenzisa isixhobo esingafaniyo esingenazingcingo, umzekelo imizila kunye neemodem, ukwenza unxibelelwano olungenazingcingo, apho ungadibanisa khona i-smartphone, ithebhulethi, iPC, okanye esinye isixhobo.
Isantya, amandla, uluhlu, kunye neendleko ze-WiFi hotspot zingahluka. Okwangoku umxholo opheleleyo emva kweWiFi hotspot uyafana kunethiwekhi esekwe ekhaya, kwaye unokunxibelelana nokusebenzisa indawo eneWiFi ngokufanayo ungasebenzisa inethiwekhi ye-WiFi yangaphakathi.
Iindidi zeendawo zokuhlala ze-WiFi
Nangona iindawo zokuhlala ze-WiFi zihlala zifana, kukho iintlobo ezahlukeneyo zeendawo zokuhlala ezikhoyo, kwaye zinemilinganiselo embalwa ecacileyo.
Indawo yeWiFi yoluntu
Iindawo zokuhlala zeWiFi zikawonke-wonke yile nto ibonakala ngathi. Ezona ndawo zinobunkunkqele ubukhulu becala- nangona kungenjalo maxa onke- zisimahla ukuzisebenzisa. Iindawo ezinje ngeekhefi, ilayibrari kawonkewonke, iivenkile zentengiso, kunye neminye imibutho kunye neenkampani zinokunika isimahla, uqhagamshelo lwe-WiFi yoluntu kubathengi. Kwiidolophu ezimbalwa, ulawulo loluntu okanye ii-ISPs zinokubonelela ngoqhagamshelo lweWiFi yoluntu kwiindawo ezithile. Oku kusimahla, kodwa kwiindawo ezimbalwa, ezinje ngezikhululo zeenqwelo moya kunye neehotele, kuya kufuneka ubhatale ukufikelela kwi-WiFi yoluntu.
Iindawo zefowuni zeWiFi
Kukho iintlobo ezahlukeneyo zeendawo zokuhlala ezishushu. Umzekelo, uyazi ukuba unokusebenzisa i-iPhone njengendawo ene-Wi-Fi? Okufanayo kulungile kwii-smartphones ezinkulu ze-Android. Vala nje eli nqaku kwifowuni yakho kwaye usebenzise idatha yeselula ukwenza indawo ene-WiFi. Emva kwexesha, unokuqhagamshela kule ndawo iphathekayo ngePC okanye esinye isixhobo esingabandakanyi idatha yeselfowuni.
Kananjalo unokuthenga indawo eneendawo zeWi-Fi ezenzelwe injongo yokutshintsha uqhagamshelo lwedatha yeselfowni kunxibelelwano olunamandla lweWiFi. Abantu abatyelele kakhulu emsebenzini okanye abahlala befuna ukufikelela kunxibelelwano lweWiFi olunokuthenjwa banokuthi bathathe inxaxheba kwesinye sezixhobo ezinokuthengwa kwiinkampani ezininzi zeefowuni eziphathwayo.
Iindawo zokuhlala esele zihlawulelwe
Iindawo zokuhlala ze-WiFi ezihlawulwe kwangaphambili ziyafana neendawo zeeselfowuni, zisenalo umda wedatha onokuyisebenzisa. Unokuhlawulela le datha, emva kokuba uphelelwe lixesha, unokuthenga ngokuzenzekelayo. Le yeyona ndlela ilungileyo yokufumana i-hotspot yeselula ngaphandle kokubhaliswa kwedatha ekude.
Eyona ndlela ilula yokufumana i-WiFi hotspot kukuvula ikhompyuter yakho okanye iselfowuni kwaye uqalise ukukhangela. Kwiindawo zikawonke-wonke, uya kuqaphela ukuba zininzi iindawo ezivulekileyo, ezindawo zokuhlala zikaWiFi onokuthi udibanise nazo, ngaphandle kweendleko. Unokukhangela iindawo zokuhlala ze-WiFi ezibonelelwa yi-ISP yakho.